Waxaa mar kale dib usoo cusboonaadaay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug. Khilaafkii hore ayaa salka ku hayey go’aankii la xiriiray mowqifka dawladda ee dawladda ee khilaafka Gacanka, hase yeeshee kan ayaa la xiriira heshiiska awood-qaybsiga ah lala gaadhay ururka Ahlu Sunna Wal-Jamaaca.
Haddaba mas’uuliyiinta la sheegay inay kasoo horjeedaan awoodqaybsiga waxa aka mid ah Guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir. Nuur Bukhaari ayuu uga warramay mowqifkooda.
VOA waxay isku dayday inay la xiriirto dhinaca madaxweynaha Maamulka Galmudug balse ilaa haatan kaaliyayaashiisu ay noo sheegeen inuu shri ku jiro, marka ugu horraysa ee ay suurtogashana waan idiin soo gudbinaynaa.
Hase yeeshee waxaanu khadka telefoonka ku helnay Xaaji Bashiir Xaashi Diraac oo isna ka mid ah xildhibaannada Galmudug oo sheegya in loo baahan yahay in la dhowro dib u heshiisiinta lala gaaray Ahlu Sunna Wal-Jamaac. Isla Nuur Bukhaari ayuu u warramay.
Dhageyso Khilaafka Galmudug